Maxamuud Axmed Muuse | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha | Page 3
Tarabiyaynta, daryeelidda, kobcinta garaadka caruurta waa asaaska guriga. Barbaarinta awlaada waa lagama maarmaan, waxayna uhorseedaa adduun iyo aakhiraba in uu liibaano. Si taas loo helana waa in la helaa 6 daan qodob. Hooyo wanaagsan: Hooyada wanaagsani waxay ka qeyb qaadataa korinta ilmaha, waana tiirka kowaad sababtoo ah hooyadu haddii ay xumaato ilmuhuna waa xumaanaya hadday wanaagsanaatana ubadku waa wanaagsanaadaa. Qoysku waxa uu ka kooban yahay Aabbe, Hooyo iyo Awlaad, haddii mid kamid ah uu meesha ka baxo ama uu xumaado waxaa lumaya meeshana ka baxaya tarabiyadda caruurta. Aabbe si aad u hesho caruur wanaagsan, dooro hooyo wanaagsan, tarabiyaysan, akhlaaq wanaagsanna …
Sida caadada ah habeenka kowaad ee arooska, waa ka duwan yahay habeenada kale. Waayo waxaa isku cusub lammaanayaasha isguursaday khaasatan gabadha caruusadda ahi waxay dareentaa baqdin iyo yaxyax tira badan. Welwel saa’id ah, waxaana kabata xishoodka. Ninka waa in uu la socdaa dareenka xaaskiisa cusub noloshuna ku cusubtahay. Isku day in aad dareensiiso in aysan biqin, garabkeedana joogto, wehel iyo lammaanena utahay. Waxyaalaha ugu badan oo gabadha cabsida ku abuuraya waxaa keena: Waxay arkaysaa ummad badan, taasna waxay keentaa in ay dareento baqdin saa’id ah, farxaduna way yaraataa. Waxay cabsi ka qabtaa ninkeeda oo aysan garanayn waxa ay kala kulmi …
Dhisidda guriga waxay ubaahan tahay cilmi iyo caqli wada jira, waayo aragmimo iyo oolimaad badan, feker iyo ka fiirsasho badan, tijaabo iyo turxaan bixin badan, talo iyo tusaalooyin badan, tabar iyo tab. Asaaska qoys wanaagsan waa tiir kamida tiirarka adduunku ku dhisan yahay, haddii uusan jireena cidi dunida kor keeda joogteen. Dunida markii Alle uumay waxa uu ku dhex uumay waxa mood iyo nool dunida korkeeda yaal. Nabi Aadan NNKH, waxa la keenay dunida korkeeda isaga oo keligii ah, aan qofna wehelin. Alle ayaa feertiisa ka uumay lammaanihiisa Xaawo, oo ah halka laga soo fircamay hooyo Xaawo iyo aabbe Adaan. …
Maxaa Keena Qoys Burburka?
Inta badan waxaad maqashaan khilaafaad soo kala dhexgala lammaanayaasha isqaba balse ma garanaysaan sababta keena khilaafaadka qoyska. Kala shaki:- Shakiga waa mida ugu weyn ee soo kala dhexgala labada lammaane, waana sababaha ugu weyn ee burburka qoyska keena. Waxaa laga yabaa in gabadhu ka shakido ninka, una qaadato in uu jiray meelkale ama gabadh kale ku maqnaa. Taasna ay keento buuq iyo qeylo badan oo soo kala dhexgala labada lammaane, halkaasna ay ka dhalato in lakala tago. Waxaa laga yabaa in ninka qudhiisa shaki kagalo xaaskiisa, ama uu isdhaho qoftaada meel kale ayay jirtay oo rag kale bay la socotay. …
In badan waxaad arkaysaa waalid badan oo ka cabanaya awlaadooda, waxayna dhahayaan waa caasiyiin, wax nama taraan, nama soo xiriiriyaan, waa nagu afceliyaan iyo ereyo lamida. Waalidku waxa uu kaaga baahan yahay xanaanayn badan, taakuleyn, latacaalid xaaladdiisa caafimaad, daryeelid dhan walba ah, ka fekeridda cunadda uu cunaayo, waxa uu jecelyahay iyo waxa uu necebyahay. Waaridku iyagaa usabab ahaa in aad adduunka timaado Alle ka sokow, iyagaana intaan ku soo leekeeyay, iyagaana dhib iyo rafaad kula soo maray adoon aan dad ahayn, jirin, waxna aqoon. Kawaran haddii aad markii ay ku koriyeen, wax ku bareen, qof muqdar ah noqotid, haddii meeshaad …
Ayman waxay ahayd gabadh aad uda’yar, waxay la noolayd hooyadeed Canab iyo aabeheed Faarax. Ayman maadaama ay yarayd waxaa la geeyay iskuul kuyaal magaalada Boosaaso. Boosaaso waa meel cimilo kala duwan, waqtiyada qaar lama joogi karo. Inta badan dadka deegaanka waa ka xagaa baxaan waxaana lakala aadaa Qardho, Carmo, Alxamdulillaah, Dhahar, Ufayn, Garoowe, Gaalkacyo, Ceerigaabo, Bareedo, Caluula, Goldogob ilaa Hargaysa. Ayman ciddeeda kama xagaa baxaan Boosaaso waayo waa dad dan’yar ah oo aan haysan wax ka baxsan noloshooda. Waxaana ku adag in gabadhooda oo qudha oo dunida ka eeganayaan in ay iskuulkeeda awoodi waayaan. Ayman waa ogtahay dhaqaala yarida reerkeeda, …
Isqabqabsiga qoyska waa aafada soo wajahda lammaanayaasha wada degan, iyadoo ay ka dhalato qoys burbur, is aaminaad la’aan, kala shaki soo kala wajaha dadka wada nool IWM. Waxayna sababtay qoysas badan oo Soomaaliyeed in ay ku burbureen wax basiid ah oo la xalin karaayay wallow waxkasta qadar yihiin haddana ay ku dhacaan aqoondari, islaweyni iyo masuuliyad xumo. Waxa aad usoo batay xilligaan aan maanta joogno qoys burburka, waxaana arkaysaa reero hal bil deganaa oo haddana dumay. Waxaana ka dhasha saamayn fog iyo isnaceyb iyo kala fogaansho. Waxaan arkay dad maanta oo kale is mehersaday isla habeenkiina is furay iyo kuwa …
Dharaaruhu waa isbeddelaan, waqti walba waxa uu wataa waayihiisa, maalin waad murugoonaysaa, maalina waad faraxsantahay, maalina waxba matihid. Dadkuna waxay mar walba ku suganyihiin farxad iyo murugo, feker iyo walbahaar. Maxamed Bilaal waxa uu muddo la socday oo jaceyl iyo kalgacal la jilaayay Barni. Barni iyo Maxamed waxay sheeko jaceyl wadaagayeen muddo lix sano ah oo ku jireen farxad iyo rayn rayn, mana aysan arkin dhib iyo lugooyo toona. Waxay ahaayeen duul jecel in midba kan kale faraxsanaado oo uusan midkoodna dareemin wax murugo ah. Balse farxaddu ma laasinto mar walba, waqtiguna waa mid ku dabra. Waxaa dhacday maalin maalmaha …
Qoom kasta oo dunida ku nool waxaa lagu ibtileeyay imtixaan ugooniya, waddamada qaar waxaa lagu imtixaamaa dabeylo, baraf, kuleyl, abaaro, cuduro, dagaaalo, faqri, dhulgariir IWM. Waddan kasta waxaa ugooniya dhibaato uu la daalaa dhacayo oo uu xal uwaayay. Soomaalida waxaa lagu imtixaamay waxyaalo badan oo mustaqbalkeedii mugdi gashay. Waxaana nagu habsaday waxyaalo badan oo ay ka midyihiin: Qabyaalad: Waa aafo nagu habsatay haddii aan nahay Soomaali, waana cudurka keliya oo aan daawo u la’nahay waana mid noo keenay dhibaato aad uweyn oo midnimadeenii kala jaray, dadkii isku ahaa xasabada, xididka, xigtada midba midka kale ma arki karo sababo qabiil awgiis. …
Waxaa looga hortagi karaa siyaabo badan, isbeddelka cimilada waxaana lagu wajahayaa xaalad kasta sida ay tahay: B) Canshuur: In lagu soo rogo canshuur adag shirkadaha. Shirkad kastaana ay bixiso inta ay soosaartay oo qiiq ah, in laga qaado qiime u dhigma, si loo yareeyo kaarboon laba ogsaydhka hawada galaya. T) Dhir abuurid: Si loo xakameeyo kaarboon laba ogsaydhka hawada kubadanaya in la sameeyo dhir beerid si looga hortago isbeddelka cimilada. Waayo dhirtu waxa ay qaadataa kaarboon laba ogsaydh haddii lawaayo dhir, kaarboonkii waxa uu kubadanayaa hawada waxaana dhacaya in ay hawadu diiranaanto. J) Xeer hoosaad: In lasameeyo xeerar qeexaya in …